100PLUS Myanmar @100plusmyanmar # Instagram Posts - InstantGram
Rehydrate, Refresh & Re-energise with 100 PLUS - Myanmar's favorite isotonic drink!
Last post: 16.02.2018 10:59
Posts by 100plusmyanmar
ကဲ ဒီနေ့တော့ သောက်နေကျ မဟုတ်တဲ့ ဟာ တစ်ခုခုသောက်ချင်နေတာလား? 100PLUS မှ ရေဓာတ်ဖြည့်အာနိသင်ရှိသည့် Original, Lemon Lime နဲ့ Orange ဆိုပြီး အရသာ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာကို ယူပြီး မော့လိုက်ရုံပဲနော်! #100PLUS #original #orange #LemonLime
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တကွ တစ်ကမ္ဘာလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ 100PLUS က ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ #100PLUS #Myanmar #UnionDay
100PLUS 325ml သံဗူး ၁၈ဗူး ဝယ်ယူအားပေးပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျောပိုးအိတ်လေး ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးလေး လာပါပြီခင်ဗျာ! ရရှိနိုင်မယ့် နေရာတွေကတော့ - Market Place ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်အထိ၊ - City Mart ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်အထိနဲ့ - Ocean ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်း လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက် အမြန်သွားဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်...
Mandalay 100PLUS Active Run မှာ ဝင်နွှဲမယ့် ဘော်ဒါတို့… ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်ကနေ ၉ ရက်အထိ၊ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ၅ နာရီအတွင်း၊ ဗထူးကွင်းမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေးနေပြီဗျို့။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ယူလာဖို့ လိုပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲနေ့ရောက်ရင် ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပေးလို့ မရတော့တဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲနေ့မရောက်ခင် ကြိုထုတ်ထားဦးနေ်ာ! #mandalay100plusactiverun2018
Mandalay 100PLUS Active Run လက်မှတ်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့အထိပဲ ရောင်းပေးမှာမို့ လက်မှတ်တွေ မကုန်ခင် တစ်စောင်ကို ၅,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွေမှာ မြန်မြန်သွားဝယ်ထားဦးနော်။ - City Mart (၁၉လမ်း) - Ocean (Diamond Plaza နှင့် Mingalar Mandalay) နှင့် - နီးစပ်ရာ Gym များ #mandalay100plusactiverun2018
ရိုးမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ 3KM ပြေးကြမယ့် ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ အပြေးသမားတွေကတော့ 100PLUS ဦးထုပ်လေးတွေဆောင်းပြီး အားအင်အပြည့်နဲ့ တာထွက်လာကြတာပေါ့.... #YYIM2018 #100PLUS
မာရသွန်မှာ ဝင်နွှဲဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့က မက်ဆေ့ကနေ ခဏခဏမေးလာတဲ့အတွက် ဘယ်အချိန်မှာ စပြီး ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတဲ့ဒဏ်ကို ခံစားရသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အများအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ ရေမဆာခင်ကတည်းက ရေကိုကြိုပြီး သောက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရေဆာတဲ့အချိန်မှ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို နောက်ကျသွားမှာပါ။ ရေချည်းသက်သက် သောက်နေရုံမဟုတ်ဘဲ ဓာတ်ဆားတွေပါဝင်တဲ့ 100PLUS ကို သောက်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mandalay 100PLUS Active Run အတွက် လက်မှတ်တွေ ဘယ်မှာ ဝယ်ရမလဲဆိုတာ သိချင်နေကြပြီဟုတ်! ၁၀ ကီလိုမီတာ ပြေးမလား? ၃.၅ ကီလိုမီတာပြေးမလား? လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့ ၅၀၀၀ ကျပ်ပါ။ လက်မှတ်တွေကို ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ကနေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့အထိ ဒီနေရာတွေမှာ ဝယ်လို့ ရနေပါပြီ။ City Mart (၁၉လမ်း) Ocean (Diamond Plaza နှင့် Mingalar Mandalay) နီးစပ်ရာ gym အားကစား ခန်းမများ
ရွှေမန်းသားတို့အတွက် Mandalay 100PLUS Active Run မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီး လာပါပြီခင်ဗျာ။ 100PLUS ကနေ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ စနေနေ့မှာ ကျင်းပသွားမှာပါ။ (၁၀) ကီလိုမီတာနဲ့ (၃.၅) ကီလိုမီတာ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား နှစ်မျိုးပါဝင်မှာဆိုတော့ မိသားစုဝင်တွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဝင်ပြေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ နောက်ရက်တွေမှာ ဝင်ခွင့်လက်မှတ်သတင်းနဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ #Mandalay100PlusActiveRun2018 #Mandalay
Gym မှာ မန်ဘာဝင်ထားမှ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ရမယ်လို့ ဘယ်သူကပြောလဲ? အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မနက် ၆ နာရီခွဲကနေ ၇ နာရီခွဲအထိ မျှော်စင်ကျွန်းဝင်ပေါက်နားက ကန်တော်ကြီး view point မှာ Fit Way Gym နဲ့ 100PLUS တို့ ပူးပေါင်းပြီး စီစဉ်ထားတဲ့ အခမဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အစီအစဉ်လေးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မနက်ဖြန်လာပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ အောက်မှာ မန်းရှင်းခေါ်သွားခဲ့ပါဦး။ #100PLUS #FitWayGym #Active
မနေ့က မဟာဗန္ဓလပန်းခြံရှေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ နှစ် ၇၀ မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးကို လာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့သူတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ရိုးရာကစားနည်းတွေထဲမှာ ဘယ်ကစားနည်းကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါဦး! #100PLUS #IndependenceDay #Traditional #Games
လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ရိုးရာကစားနည်းတွေကစားဖို့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်။ ဒီတစ်ပတ် ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်၊ မနက် ၈ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီထိ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ 100PLUS တို့က ကြီးမှူးပြီး နှစ် ၇၀ မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပသွားမှာဖြစ်လို့ 100PLUS နဲ့အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ #IndependenceDay #100PLUS
ရိုးမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးကို ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ့်သူတွေနဲ့ အားကစားလုပ်ရတာ ကြိုက်တဲ့သူ တွေအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်၇ာ100PLUS Active ၆ ဗူး ဝယ်ယူတဲ့သူတွေတိုင်း 100PLUS Active ရေဗူး ၁ ဗူး လက်ဆောင် ရမှာပါ။ ဇန်နဝါရီလအတွင်း City Mart ဆိုင်ခွဲတွေ မှာ ၄ရက် မှ ၁၇ရက် ၊ Ocean ဆိုင်ခွဲတွေမှာဆိုရင် ၅ရက် မှ ၁၈ရက် နဲ့ အခြား စူပါမားကတ်တွေမှာတော့ ၁ရက် မှ ၃၁ရက် အတွင်း ရမှာဖြစ်ပြီး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားလို့ မကုန်ခင်တော့ မြန်မြန်သွားဝယ်ထားမှ ဖြစ်မယ်ဗျို့။ #100PLUS #Active
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ 100PLUS သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်နေအောင် အားပေးနေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နှစ်သစ်မှာ အရင်ထက်ပိုပြီး ပွဲတွေများများ ကျင်းပနိုင်ဖို့လည်း မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးဗျ။ တချိန်တည်းမှာပဲ100PLUS နဲ့အတူ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး အားသစ်တွေလောင်းကြဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်! #HappyNewYear2018 #100PLUS
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေဗျ။ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှာ လန်းလန်းဆန်းဆန်း အားအင်အပြည့်နဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေစေဖို့ဆိုရင် 100PLUS ကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရဘူးနေ်ာ! #MerryChristmas2017 #Myanmar #100PLUS
သင်သိပါသလား? ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ် ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်လေးပဲ လျော့ကျသွားရင်တောင် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသလို အားကစားလုပ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်း ကျသွားစေနိုင်တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ 100PLUS နဲ့ ၁၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်! #100PLUS #Myanmar
အားကစား လုပ်ကြပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ချွေးထွက်ကြတာချည်းပါပဲ။ ချွေးထွက်တာက ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးသွားစေသလို အဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ ဆားဓာတ်တွေကိုလည်း ဆုံးရှံးသွားစေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနေပြီဆိုရင်တော့ အလွယ်လေးပါ။ 100PLUS Active လေး သောက်ပြီးပြန်လည်ဖြည့်တင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့! #100PLUS #Active
အရသာအမျိုးမျိုးကို ခံစားရင်း 100PLUS နဲ့အတူ ရေဓာတ်ဖြည့်ကြမယ်! ဒီထဲက ဘယ်အရသာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ? ကွန်မန့်မှာ ဖြေပေးသွားဦးနေ်ာ! - 100PLUS Original - 100PLUS Lemon Lime - 100PLUS Orange - 100PLUS Active #100PLUS #Original #LemonLime #Orange #Active
100PLUS ရဲ့ ပျော်စရာအားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆိုတော့ ဒီပိတ်ရက်လေးက ဘယ်လောက်တောင် သာယာလိုက်သလဲနော်! ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ကို ဒီလထဲမှာကျင်းပနေတဲ့ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ကျင်းပနေတဲ့ လူထုလမ်းလျှောက်ပွဲတွေမှာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီမနက်တုန်းကလည်း မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံမှာ အားကစားလုပ်နေတဲ့ လူထောင်ပေါင်းများစွာကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြသွားပါဦး! #100PLUS #Active #Fun
သင်သိပါသလား? ဆောင်းရာသီရဲ့ လေကြောင့် နွေရာသီမှာထက် ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီးရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလေ။ ရာသီဥတုပိုအေးလာလို့ ကျွန်တော်တို့ ချွေးမထွက်ပေမယ့် အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့လေကြောင့် ရေငတ်မှုကို ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ လာမယ့် ရိုးမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်မှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း 100PLUS နဲ့အတူ နေ့စဉ်ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်! #100PLUS #YYIM2018 #Run
ရိုးမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပဖို့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ပဲလိုတော့တယ်နော်… ဝင်နွှဲမယ့်သူတွေကတော့ ခုလောက်ကတည်းက လေ့ကျင့်နေကြလောက်ရောပေါ့။ ရေဓာတ်ပြည့်တာနဲ့ ရေဓာတ်မပြည့်တဲ့ ခြားနားချက်တွေကိုလည်း တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ။ ပြီးတော့ 100PLUS နဲ့အတူ နေ့စဉ် ရေဓာတ်နဲ့ အားအင်တွေကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ မမေ့နဲ့ဦးဗျို့! #100PLUS #Run #YYIM2018
ကိုယ့်ကို အလွယ်တကူနဲ့ လန်းသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာများရှိမလဲ? ဒီနေရာမှာတော့ 100PLUS အေးအေးလေးကို ဘယ်အရာမှာ ယှဉ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့တာရေဓာတ်ပြည့်နေစေဖို့နဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ လိုလာတဲ့အချိန်တိုင်း သောက်နိုင်ဖို့အတွက် အိတ်ထဲမှာ တစ်ဗူးလောက်တော့ ဆောင်ထားလိုက်တော့ဗျို့! #100PLUS #Myanmar #Original
ဒီဇင်ဘာလကို ရောက်ပြီဆိုတော့ ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ကြဖို့ သူငယ်ချင်းတို့မှာ အစီအစဉ်ရှိလားဗျ။ အားကစားတွေများများလုပ်ရပြီဆိုမှတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်တွေလည်း ဆုံးရှုံးတာပေါ့။ အဲလိုအချိန်မျိုးရောက်တဲ့အခါ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ဖို့ ရေတစ်မျိုးတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဗီတာမင် B3, B6 နဲ့ B12 တို့ ထပ်ပေါင်းထားပြိး gas မပါဝင်တဲ့ 100PLUS Active လိုတာပေါ့။ #100PLUS #Active #December #Sport
ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ကနေ ၉ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမယ့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်မမီ အားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့ ၂၉ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက် 100PLUS က ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ မသန်စွမ်းအားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာ ကျင်းပမယ့် အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်း အခုတစ်ပတ်မှာ လာရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားကစားသမားတွေကို အားပေးဖို့အတွက်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ #100PLUS #PARAGames #Yangon